Oiran ပြည့်တန်ဆာတို့ လုပ်လို့မရတဲ့ အချက် ၃ ချက် !!!! - JAPO Japanese News
ဟူး 10 Jun 2020, 9:20 မနက်
အဲဒိုခေတ်၊ ဆာမူရိုင်းခေတ်တုန်းကပေါ့ . . .
ထိုအချိန်က ပြည့်တန်ဆာတွေကို 遊女(Youjo) လို့ခေါ်ကြပြီး ထိုအချိန်က မြို့တော် အဲဒို (ယခုတိုကျို) မှာရှိတဲ့ Yoshiwara လို့ခေါ်တဲ့နေရာမှာ စုဝေးခဲ့ကြပါတယ်။
အဲဒီမှာရှိတဲ့ မိန်းကလေးအများစုကတော့ မိဘတွေရဲ့ အကြွေးတွေကြောင့် ရောင်းစားခံရတဲ့ သူတွေများပါတယ်။
အသက် ၇နှစ် ၈နှစ် ကတည်းက ခေါ်ဆောင်ခံခဲ့ရတဲ့ သူမတို့တစ်တွေအတွက်ကတော့ ဒီနေရာကနေ လွတ်မြောက် ထွက်ပြေးချင်တယ်၊ သာမန်ဘဝမှာပဲ နေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အသက်၂၈နှစ်အထိ နှစ်အကြာကြီး ပြည့်တန်ဆာလုပ်ကိုင်ပြီးမှရယ် နှင့် အကြွေးတွေကို ပေးဆပ်ပေးနိုင်မယ့် တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ရှာတွေ့နိုင်မှသာ လွတ်မြောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အများစုက‌တော့ လိင်မှတဆင့်ကူးစက်ရောဂါတွေကြောင့် သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
သူတို့တွေရဲ့ ပျမ်းမျှသက်တမ်းက ၂၂.၇ နှစ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ဒါပေမယ့် သေဆုံးသွားကြရတာက ရောဂါတစ်ခုတည်းကြောင့်သာမဟုတ်ပါဘူး။စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်တဲ့ သူတွေထဲမှာ ဆိုင်ပိုင်ရှင်ရဲ့ အရိုက်ခံရပြီး သေစေနိုင်တာတွေလည်းရှိခဲ့ပြီး ဒါဟာ ပုံမှန်မဟုတ်ခဲ့တဲ့ပုံပါပဲ။
ဒီလိုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ အဝတ်မပါတဲ့ကိုယ်ဗလာကို Goza ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းပြီး Jokanji Temple သို့သယ်ဆောင်လာပါတယ်။
သူတို့ကို ခွေးတွေ ကြောင်တွေ ကဲ့သို့ဆက်ဆံခဲ့ကြတယ်လို့လည်း ဆိုကြပါတယ်။
လူသားတစ်ဦးအဖြစ် သင်္ဂြိုဟ်လိုက်မယ်ဆိုရင် နောက်ပိုင်းမှာ အမျက်‌‌‌‌‌ဒေါသတွေနဲ့ မကျွတ်လွတ်တာတွေဖြစ်မှာစိုးလို့ တိရိစ္ဆာန်အဖြစ် သင်္ဂြိုဟ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်တဲ့။
ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ အကြောင်းဖြစ်ပေမယ့် ဘာတွေလုပ်ခဲ့မိလို့ ဒီလောက်အထိဖြစ်ရတာလဲ?အဲတုန်းက လိုက်နာရမယ့် စည်းမျဉ်း ခြောက်ခုရှိပါတယ်။
၎င်းကို ထိုအချိန်တုန်းက တရုတ်ကိုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ အန္တရာယ်ရှိတဲ့အရာအဖြစ် ဂျပန်တွင် အသုံးပြုရန် တားမြစ်ထားတဲ့အရာဖြစ်လို့ပါ။
ဒီတစ်ချက်ကတော့ ဖောက်သည်များရဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်များကိုခိုးယူခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယေဘုယျအားဖြင့် ဒါဟာ ပုံမှန်ရာဇ၀တ်မှုတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော် ဒီလိုဖြစ်ခဲ့လျှင်တော့ ဆိုင်ရဲ့ ဂုဏ်သတင်းပါ ကျဆင်းသွားတာမို့လို့
ဒီလိုလုပ်တဲ့သူတွေကတော့ ပြင်းထန်စွာ အပြစ်ပေးခံခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။
၃။ ငွေတောင်းခံစာ၊ ကတိစာ ပြုလုပ်ခြင်း
ငွေတောင်းခံလွှာတစ်စာချုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဟာလည်း ပြစ်မှုတစ်ခုပါပဲ။
တစ်နည်းအားဖြင့် ကျပန်းဖောက်သည်တွေနဲ့ ကတိပေးတာကိုလည်း တားမြစ်ထားပါတယ်။
ပြည့်တန်ဆာတစ်ဦး အတွက် တောင်းဆိုထားတဲ့ စာသားကတော့ ဒီလိုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
“ ကျွန်မ သင့်ရဲ့အပိုင် ဖြစ်ချင်ပါတယ်။ဒါဟာ မုသားမဟုတ်ပါဘူး ကျေးဇူးပြုပြီး ထပ်လာပါဦးနော် “ ဒါဟာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ စာတစ်စောင်နဲ့တူပါတယ်။
လက်ရှိခေတ်မှာတော့ မိန်းကလေးဘား စသည်တို့လိုနေရာမျိုးမှာ အလွန်ဆိုးဝါးတဲ့ကြေညာချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး
ဒီလိုမျိုး အလွန်အကျွံရောင်းချခြင်းကိုလည်း တားမြစ်ထားပုံရပါတယ်။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ အလုပ်နဲ့ ရောထွေးတဲ့အခါ ဖောက်သည်များ ဆုံးရှုံးနိုင်ပြီး
အခြားပြည့်တန်ဆာများနှင့် ပြဿနာ များကိုရှောင်ရှားရန်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ထွက်ပြေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သင့်မိဘများ၏ ကြွေးမြီအစားထိုးအဖြစ် သင့်ကို ယူဆောင်လာခြင်းကြောင့် သင့်ရဲ့ တာ၀န်များမှ နုတ်ထွက်ခွင့်မပြုပါဘူး။
ကိုယ်လုပ်ကိုင်တဲ့ဆိုင်တွေကနေ အအဝေးဆုံးသွားနိုင်တဲ့နေရာတောင်မှ Yoshihara ထဲ မှ ထွက်ခွင့်မပြုပါဘူး။
သတ်မှတ် မြို့တွင်းထဲသာ နေထိုင်နိုင်ပုံရပါတယ်။
၅။ အတွင်း လူကုန်ကူးမှု
Guouchi ဆိုသည်မှာ စတိုးဆိုင်အတွင်း၌ဖြစ်ပါတယ်။
ပြည့်တန်ဆာအများစုက ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်နှင့် နှစ်ဆယ်ကျော်၌ရှိကြတဲ့အတွက် ဒီလိုအလုပ် လုပ်ကိုင်နေကြသော်လည်း သဘာဝတရားအရ အခြားအမျိုးသမီးတွေကဲ့သို့ပင် ချစ်ခြင်းမေတ္တာတို့ ထွက်ပေါ်လာသည်မှာ သဘာဝပင်ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ကြိုက်နှစ်သက်သောအမျိုးသားများ (သို့) အမျိုးသား ၀န်ထမ်းများကိုဖိတ်ခေါ်ခြင်း၊
ပုံမှန်အခကြေးငွေမပေးသည့်အပြင် အခြားပါတီတစ်ခုလည်းပြုလုပ်တဲ့ အချိန်များရှိပုံရပါတယ်။
ပြည့်တန်ဆာတစ်ဦးသည် စတိုးဆိုင်အတွက် အရေးပါသော ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာ လုံးဝတားဆီးခံခဲ့ရတဲ့ စည်းမျဉ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပြည့်တန်ဆာတစ်ဦး အတွက် အလုပ်နှင့်ပုဂ္ဂလိက အကြား ခွဲခြားမှုမရှိပါဘူး။
ပြီးတော့ သူမဟာ စတိုးဆိုင်ထဲမှာ အမြဲရှိနေရမှာမလို့ပဲ။
ဖောက်သည်ယောကျ်ားလေးနဲ့ ချစ်ကျွမ်းဝင်မိပြီး ဖောက်သည်ရော ပြည့်တန်ဆာသူမရော အတူတူသေကြမယ် ဆိုတာကို ဆိုလိုပြီး ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။
နှလုံးသားထဲမှာ သစ္စာကတိပြုထားတဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်း ပြည့်တန်ဆာ က ကတိပေးပါတယ်။
ငါသည် ငါ့ရဲ့လက်သန်းကို ဖြတ်ပြီး လွှဲပြောင်းပေးတယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဂျပန်လူမျိုးတွေမှာဆိုရင် ကတိပေးကြတဲ့အခါ လက်သန်းချောင်းလေးများကို အတူတကွချိတ်ထားခြင်းဖြင့် ကတိများပေးလေ့ရှိကြပြီး ကလေးဘဝတုန်းကဆို လူတိုင်းလိုလိုလုပ်ဖူးကြပါတယ်။
မြန်မာမှာလည်း ရှိတယ်နော် ငယ်ငယ်တုန်းက လက်ညှိုးခြင်းချိတ်ပြီး ကတိပေးကြတာလေ။ လက်ချောင်းဖြတ်တာတော့ မပါဘူးပေါ့နော်။
၎င်းကို ဂျပန်မှာ ကတိပေးပြီး လက်ချောင်းဖြတ်ခြင်းဟုခေါ်ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ပြည့်တန်ဆာကလုပ်တဲ့သူကတော့ သူမရဲ့ လက်ချောင်းလေးကို တကယ်ပဲ ဖြတ်တောက်တာပါ။ဒီလိုမျိုး ချစ်ကျွမ်းဝင်မိပြီးတဲ့နောက် လက်ချောင်းမဖြတ်ဘူးဆိုရင် အပြစ်သားအဖြစ် ဆက်ဆံခံရပါတယ်။
အကယ်၍ မသေနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ ပြည့်တန်ဆာမိန်းကလေးရော သူမရဲ့ကောင်လေးရော လူထက်နိမ့်ကျတဲ့ အဆင့်ဖြင့် သတ်မှတ်ကာ ဆက်ဆံခြင်းခံရပါတယ်။
လူလို သတ်မှတ်ဆက်ဆံခြင်း မခံရတော့ဘူး ဆိုတာက ဆိုင်ရှင်က သတ်ပစ်ရင်တောင် ကိစ္စမရှိဘူးဆိုတဲ့ သဘောပါပဲ။
အဲဒီအချိန်တုန်းက သနားကြင်နာမှု မခံရတဲ့ သနားစရာကောင်းတဲ့ သူတို့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ ဘဝ. . .
ဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေက နောက်ထပ်ပြစ်မှု ထပ်ပြီးမလုပ်နိုင်အောင် အပြစ်မပေးလို့ မရဘူးဆိုပေမယ့် ဒါကိုသိလိုက်ရတော့ သူတို့ရဲ့ ဘဝက အလွန်ခက်ခဲဘဝဆိုတာကို မင်းနားလည်နိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ပြည့်တန်ဆာရဲ့ ထိပ်တန်းဖြစ်တဲ့ Oiran ကတော့ အရမ်းလှပတဲ့ ဝတ်စုံကြောင့် ပြည်ပမှနိုင်ငံခြားသူတွေက မကြာခဏ Cosplay လုပ်လေ့ရှိကြပြီး
Oiran ဆိုတဲ့သူမတို့ရဲ့ တကယ့်ဘဝကို သိသွားရင်တော့ Oiran Cosplay ကို လုပ်ကြမှာ မဟုတ်တော့ဘူးထင်တယ်နော်။
ဂျပန်ရဲ့ လမ်းတွေက ဘာကြောင့် ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာရှိနေကြလဲ ဆိုတော့ ?????
ဂျပန်-ကိုးရီးယားကြား မကောင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးအတွက် ကြိုးစားပေးကြသူများ